Tergynan (တာဂျင်နန်) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Tergynan (တာဂျင်နန်)
Tergynan (တာဂျင်နန်) ကဘာလဲ။
Generic Name: Tergynan (တာဂျင်နန်) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Tergynan (တာဂျင်နန်) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Tergynan® ကို ဘတ်တီးရီးယားကြောင့် သားအိမ် လမ်းကြောင်း ရောင်ခြင်းတွင် အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဥပမာ- banal pyogenic germs, desquamative leucorrhea, trichomonas, fungal due to Candida albicans နှင့် mixed between trichomas and yeasts တွင် အသုံးပြုနိုင် သည်။
Tergynan (တာဂျင်နန်) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
သားအိမ်လမ်းကြောင်းတွင်းသို့ ထိုးမသွင်းခင် ဆေးလုံးကို စက္ကန့် ၂၀-၃၀ လောက် ရေစိမ်ပါ။ ဆေးကို ထည့်ပြီးနောက် ၁၅ မိနစ်ခန့် လဲလျောင်းနေပါ။
Tergynan (တာဂျင်နန်) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Tergynan® ကို အခန်းအပူချိန်တွင် တိုက်ရိုက်အလင်း နှင့် စိုထိုင်းမှုတို့မှ ကင်းဝေးအောင် သိမ်းဆည်းရမည်။ ဆေးပျက်စီးခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် Tergynan® ကို ရေချိုးခန်း သို့မဟုတ် ရေခဲ သေတ္တာတွင် မသိမ်းဆည်းပါနှင့်။
Tergynan® တွင် မတူညီသော ကုန်တံဆိပ်များစွာရှိသည်။ တံဆိပ်ပေါ် မူတည်ပြီး သိမ်းဆည်းမှုပုံစံ ကွဲပြားနိုင်သည်။ သိမ်းဆည်းမှုနှင့် ပတ်သက်သော ညွှန်ကြားချက်များအတွက် ဆေး၏ ဘူးကို အမြဲစစ်ရန် အရေး ကြီးသည်။ သို့မဟုတ် ဆေးရောင်းသူနှင့် တိုင်ပင်ပါ။ ဆေးများအားလုံးကို ကလေးနှင့် အိမ်မွေး တိရစ္ဆာန်များမှ ဝေးရာနေရာတွင် ထားပါ။
ညွှန်ကြားထားခြင်းမရှိဘဲ Tergynan® ကို အိမ်သာထဲ ထည့်ခြင်း၊ ရေဆင်းပိုက်ထဲ ထည့်ခြင်း မပြုပါနှင့်။ သက်တမ်းကုန်သွားပါက သို့မဟုတ် မလိုအပ်တော့ပါက ထိုထုတ်ကုန်ကို သင့်တော်စွာ စွန့်ပစ်ရန် အရေးကြီးသည်။ ထုတ်ကုန်ကို ဘေးကင်းစွာ စွန့်ပစ်နိုင်ရန် ဆေးဝါး ကျွမ်းကျင်သူနှင့် တိုင်ပင်ပါ။
Tergynan (တာဂျင်နန်) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
Tergynan® မသုံးမီ သင့်တွင် အောက်ပါတို့ရှိပါက ဆရာဝန်အား ပြောပါ။
Tergynan® တွင်ပါဝင်သော ပစ္စည်းများနှင့် ဓါတ် မတည့်ခြင်း
အခြားဆေးများ၊ အစားအစာ၊ ဆိုးဆေး၊ တိရစ္ဆာန် တို့ဖြင့် ဓါတ်မတည့်ခြင်း
အခြား ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ ရှိခြင်း၊ Tergynan® နှင့် ဓါတ်ပြုနိုင်သော ဆေးများ သောက်နေရခြင်း
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Tergynan (တာဂျင်နန်) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
အမျိုးသမီးများ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် သို့မဟုတ် နို့တိုက်စဉ်တွင် Tergynan® သုံးလျှင်ရနိုင်သော အန္တရာယ်များကို ပြည့်စုံစွာ လေ့လာထားခြင်း မရှိပါ။ Tergynan® မသောက်မီ ဖြစ်နိုင်သော အကျိုး ကျေးဇူးနှင့် အန္တရာယ်ကို ချိန်ညိရန် ဆရာဝန်နှင့် အမြဲတိုင်ပင်ပါ။
Tergynan® သည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အစား အသောက် နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့၏ သတ်မှတ်ချက် အရ ကိုယ်ဝန်ဆောင်များတွင် ထိခိုက်နိုင်ချေအဆင့် C ရှိသည်။
Tergynan (တာဂျင်နန်) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
ဤဆေးအသုံးပြုစဉ် ဖြစ်နိုင်သော (ဖြစ်ခဲသည်) ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ မှာ-
ပါးစပ်တွင် သတ္ထုအရသာ ရခြင်း
ဘယ်ဆေးတွေက Tergynan (တာဂျင်နန်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Tergynan® သည် သင်လက်ရှိသောက်နေသော အခြားဆေးများနှင့် ဓါတ်ပြုနိုင်ပြီး ဆေး၏အလုပ်လုပ်ပုံကို ပြောင်းလဲစေနိုင်သည်။ ပြင်းထန်သော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်နိုင်ချေကို မြင့်စေသည်။
The spermicide forms
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Tergynan (တာဂျင်နန်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Tergynan® သည် အစာ သို့မဟုတ် အရက် နှင့် ဓါတ်ပြုနိုင်ပြီး ဆေး၏ အလုပ်လုပ်ပုံကို ပြောင်းလဲစေ သည်။ ပြင်းထန်သော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်နိုင်ချေကို မြင့်စေသည်။ ဆေးမသောက်မီ အစာ သို့မဟုတ် အရက်နှင့် ဓါတ်ပြုခြင်း ဖြစ်နိုင်သလားသိရန် ဆရာဝန်၊ ဆေးဝါးပညာရှင်နှင့် တိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Tergynan (တာဂျင်နန်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Tergynan® သည် သင့်ကျန်းမာရေး အခြေ အနေများနှင့် အပြန်အလှန်သက်ရောက်မှုရှိသည်။ ထိုသက်ရောက်မှုသည် သင့်ကျန်းမာရေး အခြေအနေကို ပိုဆိုးစေခြင်း သို့မဟုတ် ဆေး၏အလုပ်လုပ်ပုံ ပြောင်းသွားခြင်း ကိုဖြစ်စေနိုင် သည်။ သင့်တွင် လက်ရှိ ရှိနေသော ကျန်းမာရေး အခြေအနေ အားလုံးကို ဆရာဝန်နှင့် ဆေးဝါးပညာရှင်အား အသိပေးထား ရန် အရေးကြီးသည်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Tergynan (တာဂျင်နန်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
အကြံပြု ထောက်ခံထားသော ပမာဏမှာ တစ်နေ့လျှင် ၁-၂ လုံးဖြစ်သည်။
ကလေးတွေအတွက် Tergynan (တာဂျင်နန်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
Tergynan (တာဂျင်နန်) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Tergynan® ကို အောက်ပါ ပုံစံ၊ ပြင်းအား များဖြင့် ရနိုင်ပါ သည်။
Metronidazole ၅၀၀ မီလီဂရမ် ဆေးပြား ; Neomycin Sulfate ၆၅၀၀၀ IU ; Nystatin ၁၀၀၀၀၀ IU ; Prednisolone ၃ မီလီဂရမ်
Tergynan® သောက်ရန် မေ့သွားပါက တတ်နိုင် သလောက် မြန်မြန်ပြန် သောက်ပါ။ သို့သော်လည်း နောက်တစ်ကြိမ် သောက်ရန် အချိန်ရောက်သွားပါက မေ့သွားသော အကြိမ်ကို ကျော်ပြီး ပုံမှန်အတိုင်း ဆက်သောက်ပါ။ နှစ်ကြိမ် ထပ်မသောက်ပါနှင့်။
Tergynan®. http://www.mims.com/vietnam/drug/info/neo-Tergynan. Accessed November 13, 2016
Tergynan®.http://drugbucket.com/tergynan-tablet. Accessed November 13, 2016
Tergynan®.http://www.ndrugs.com/?s=tergynan. Accessed November 13, 2016